Abesifazane abaningi bavame ukuzwa, kuhlanganise ngisho nasezintabeni. Kancane kancane iba isimo esivamile, asikho izizathu ezicacile, sivele siphuthumise konke futhi sizame. Ungakuyeka kanjani ukhathazeka futhi uphile ngokuthula, ngoba uma uhlale unenkinga nokukhathazeka, ngaleyo ndlela silimaza umzimba wakho. Indlela yokufunda ukubhekana nokukhathazeka nokujabula kwakho?
Ungakuyeka kanjani ukukhathazeka?
Umhlengikazi waseMelika uRoger Dzhelomi uqiniseka ngokugcwele ukuthi uma impilo yomuntu igcwele zonke izibopho, kuyamcindezela kakhulu. Futhi uthi udinga ukubhala phansi izibopho zakho futhi uziqede ngesigamu, kodwa ngisho nokuthi yini ebhalwe ephepheni ibheka kunesisindo. E-America kukhona ukunyakaza okunjalo kwezenhlalakahle "Sizokwenza kube lula ukuphila," amalungu alo mhlangano aqiniseke ukuthi uma ufuna ukuzibopha ngoMgqibelo ukuhlanza, udinga ukuqasha umgcini wezindlu noma wenqaba ukuhlanza. Ngisho noma kuyabiza, kodwa impilo iyabiza kakhulu.
Yenza ama-tummies akho .
Ukuhlakanipha kwamaNdiya aseMelika akungabazeki, ngakho bahleka ngemithi. Udinga ukuhleka okungenani kathathu ngosuku, futhi ngenxa yalokhu zonke izindlela zilungile - ama-anecdotes ahlakaniphile, abantu, izincwadi, amafilimu. Emva kwalokho, imicabango enzima iyohamba, futhi ukuthuthumela komzimba kususa imisipha yemisipha yentamo namahlombe, ikakhulukazi uma uhleka, uphindela emuva ikhanda lakho.
Labo abafuna ukuqeda ukucindezeleka, kudingeka ufunde inkulumo ethi "Anginayo ifoni ephathekayo." Umthwalo omningi kakhulu wokusebenza uhlala endaweni yokufinyelela. Izazi zengqondo zithi indlela eqinisekile yokulahlekelwa ukuthula iwukuba ngamakhono okuxhumana ngokweqile. Isakhiwo esidingekayo nesingokwenyama, bakholelwa, iyiselula nomshini wokuphendula, ikuvumela ukuba uthole ulwazi, futhi ungaphenduli.
Uma uvuka, cabanga .
Ngokuvamile, ukuhlaselwa kwenhliziyo kwenzeka ekuseni kakhulu, lapho izinga lokucindezeleka liphakeme kakhulu: umuntu ubuyele ephusheni, mhlawumbe engathandeki kakhulu, kepha abhekana nezinkinga empilweni yangempela. Ngaphansi kwejoka, inhliziyo ayikwazi ukuma. Lapha sidinga okungenani ukuzindla kwamaminithi ambalwa noma ekuseni imizuzu embalwa ukugxila emfanekisweni omnandi, khona-ke ukuguqulwa kusuka ebuthongweni kuya kweqiniso ngeke kube buhlungu kakhulu, futhi usuku luzobe luzolile.
Uma ukukhishwa kwezimali akukwenzi kukujabulise, shiya "imali eyengeziwe". Ukuphishekela imali kuzokukwenza ucebile, kodwa hhayi impilo enhle. Njengoba kuboniswe yizifundo ezenziwa eNyuvesi yaseCalifornia, abantu abanamanani amakhulu ngamakhadi esikweletu abaxhumene negazi banamaphesenti angu-30 ngaphezu kwalabo abangenayo lemali.
Ungahlali ohlelweni .
Cabanga ngalesi simo, owesifazane osekhulile ugijima e-T-shirt nangezicathulo, une-antenna phezu kwekhanda lakhe efonini, endlebeni eyodwa efonini, kwenye indlebe ikhanda elivela kumdlali, futhi lokhu akusiyo injabulo, kuwukucindezeleka. Ingozi yukuthi sifuna ukuthola zonke izinqubo ezintsha eziphelele kanye nobuchwepheshe. Kodwa kungcono ukuhamba okungenani ngezinye izikhathi ngaphandle kwemoto, ifoni, umculo, ukuhamba nje.
Thola umsebenzi ngomoya .
Ngokuvamile umsebenzi awutholi hero. Kunezinhlobo ezine zokusebenza: ingcweti, i-careerist, i-rational and ideist. Umdwebi ukhetha ukusebenza esimweni sakhe futhi ngokwakhe, lapho efika ehhovisi, uyabuna noma ahlupheke. Uzwela, othanda ukuthola imiyalelo, uzonda umphathi wakhe, ngubani ozomnika "ukucabanga ngokuzimela". Umdlali owenza umsebenzi wokuncintisana udinga ukuncintisana, unamandla kakhulu emzabalazweni futhi uthuthuke ezinkongweni, ongu-idealist okholelwa ekubalukeleni kwakhe angagula, kuphela emcatshangweni wokuthi uzoqhathaniswa nomunye umuntu.
Yibani i-turtle .
Uma umuntu ethi akanaso isikhathi, lokhu kubonisa isimo sokucindezeleka okungapheli. Phela, isikhathi siwukuphila, futhi uma kungekho isikhathi, khona-ke impilo kufanele iphele ngokushesha, umuntu uqala ukwesaba. Futhi akumangazi ukuthi inkambo yokuqeqeshwa kwezinsuku ezimbili "Indlela yokuqala impilo nokuqeda ukucindezeleka" ibiza imali eningi. Owesifazane ongenalwazi futhi ozolile ophindaphinda ukuthi akaphuthumanga futhi akaphuzi noma yikuphi, akakudingi lokhu kuqeqeshwa, ulungile nemivimbo yakhe futhi lokhu akuyona ingxenye yomsebenzi wakhe.
Nquma ukuthi ungumuntu ongenasiphelo
Futhi ucabange ukuthi uyavuma noma cha ngezitatimende ezinjalo:
Manje senginengqondo eminingi engqondweni yami.
Uma kungenjalo ukuthi ngizihlele kanjani, ngiqala ukucasuka.
Ngokuvamile ngikhathazeka ngezinsuku ekupheleni.
Angikwazi ukulala lapho ngiqala ukucabanga ngezinkinga.
Kusukela enjabulweni, isisu sami, emuva, ikhanda liqala ukuphumula.
Ngivame ukutshela abanye ukuthi ngizizwa okuningi.
Uma ngikhathazekile nganoma yini, ngiyakhala.
Uma ngikhathazekile, kunzima kimi ukugxila.
Bala ukuthi zingaki izimpendulo ezinhle "yebo". Uma kulingana no-1 noma 2, injabulo yakho ingaphansi kwemingcele evamile futhi awunakho ukukhathazeka ngakho. Phindaphinda lesi sivivinyo ukuze ukwazi ukubona izimpawu zokukhathazeka ngokweqile ngesikhathi.
Uma unikeza izimpendulo ezi-3 kuya kwezingu-4, isimo asibalulekile okwamanje, kodwa kunezinkinga ezihlobene nokujabula okuqinile. Uma uphendule "yebo" kumbuzo engaphezu kwezine, thatha izinyathelo eziphuthumayo, kuze kube yilapho ukukhathazeka kwakho kubonakala empilweni.
Ungaqala kanjani ukuhlala ngokuthula?
Dala isimo sezulu esihle esiseduze nawe, bese usebenzisa lezi zincomo:
Yidla ukudla okunempilo futhi ungadli ebusuku.
Uma ungakhululekile emsebenzini nasemakhaya, cabanga ngalokho okudingeka kuguqulwe empilweni.
Cabanga ngalokho okuhle, qaphela okuhle kuphela, yiba nomusa kuwe.
Nsuku zonke, hamba emoyeni omusha.
Hlala okungenani amahora angu-7 ngosuku.
Nsuku zonke, phumula futhi uzindle.
Ngesithathu ngesonto, ngena emidlalweni, uhlobo oluthandayo.
Ngesonto ngeviki, udibanise, udwebe, uye ekudansa, ulalele umculo, yenza okukuvimbela ekukhohlwa ngezinkinga zakho.
Zibekele umgomo ozokunika amandla ukuze uqhubeke.
Ungakuyeka kanjani ukhathazeka futhi uphile ngokuthula? Abaningi bethu bayazi lezi zeluleko, kodwa bambalwa kakhulu abantu okufanele. Kodwa bayakwazi ukusiza ukuqala ukuhlala ngokuthula futhi ngokuqinisekile ukubheka impilo futhi kungasiza ukuyeka ukukhathazeka. Kusukela manje kunabantu abaningi abavuselela izibalo ngonyaka ngokuhlola ukucindezeleka kanye nezinzwa. Ukuthakazelisa kungaba, ukuguqula ukuphila esihogweni futhi ngeke unikeze ngisho nosuku olumile lokuphefumula isifuba esigcwele. Khumbula ukuthi noma yisiphi isimo sesikhashana, ngoba konke kudlula.
Ukucindezeleka kokuphila kwansuku zonke komuntu wanamuhla
Indlela yokusiza indoda uma enenkinga yokulungiswa
Ungamisa kanjani amahloni enkampanini enkulu
Izaziso ohlwini lwamanani
Indlela yokuthonya abantu
Owesifazane ngemuva kwesondo - ukuthi ungesabi ukushayela imoto
Inkinga yezezimali empilweni yomndeni
Ungalungisa kanjani nokuthi yini okudingeka ukwazi mayelana nokubeletha
Ukucabangela ngendaba yokusebenza kwabafazi
I-Pyan-se (amaqebelengwane ashukela)
Inqubo yesehlukaniso ngomyalelo wenkantolo
Imithetho eyisishiyagalombili yokudla okunempilo
Ebucwebe nangembali: yini okufanele ugqoke ama-sneakers for girls
Uhlelo lokuqala lokuthuthukiswa kwezingane
Ubulili ngohlobo lwegazi
I-California ifakwe i-Veggie sandwich
Funny ukuhalalisela ngosuku lokuzalwa kwentombi yakho evesini naseprose
Iphunga isobho namazambane nama-oat flakes
Ikati leMimish, usho? Kusukela emehlweni alo mdlalo omuhle uzozizwa ungakhululekile (ividiyo)
U-Evelina Bledans ushilo isitatimende mayelana nesahlukaniso sakhe, ividiyo
UKendall noKylie Jenner bazame ngokwakhiwa kwezambatho
Indlela yokulondoloza impilo yengane, ingxoxo yabazali